အိန္ဒြာ: 5/1/10 - 6/1/10
လူငယ်လေးပေါက်ရောက်ရာ ရာသီဥတုက ကြမ်းတမ်းခက်တရော်လို့
လူငယ်တွေ အခုရေကြည်တူး အခုရေနောက်တွေ သောက်ချနေကြပေါ့
လူငယ်လေးက ဒီလိုနဲ့ အပြိုင်းအရိုင်းရှင်သန် ဒီလိုမျိုး အပြိုင်အဆိုင်ပေါက်ရောက်
လူငယ်တွေဟာ မြေဇာပင်မဟုတ် ပေါင်းမြက်တွေ မဟုတ်
လူငယ်လေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိုက်ရင်းပျိုးရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ကျီးခြောက် စာခြောက်လုပ်နေရ ကျီးကြည့် ကြောင်ကြည့် ကြည့်နေရ..
လူငယ်တွေ အစိုးမရတဲ့ ခေတ်ကြပ်နှစ်ကြပ်ထဲ.. မိုးသည်းထန် တိမ်ထူထပ် နှင်းခါးရိုက်
လူငယ်လေးရဲ့ စိုက်ကွင်းမှာမှ ပိုးဖလံကောင်တွေ ကျကျနေတတ်တော့...
လူငယ်တွေမှာ အဖျင်းအမှော်တွေ ကြားညှပ်ပါလာတော့တာပေါ့...
လူငယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မခန်းခြောက်တဲ့ ပန်းပွင့်တွေပါပဲ..
လူငယ်တွေက ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ကစားနည်းအသစ်တွေ ဒီဇိုင်းအဆန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားကြသလို..
လူငယ်တွေဟာ ခေတ်ကို အလင်းနဲ့ စဖွင့်တတ်တဲ့ အရုဏ်ဦးတွေဖြစ်သလို..
လူငယ်တွေဆိုတာမျိုးက အလျော်အစားများတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေအတွက်လည်း..
လူငယ်လေး ရီနိုမန် ဘလော့ တစ်နှစ်ပြည့်အတွက် လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့
ကဗျာကို နည်းနည်းပါးပါးပြင်ဆင် ဖြတ်တောက်ပြီး ဆားချက်လိုက်တာပါ..။
ကံ့ကော်ရနံယောင်ဆောင်ပြီး လာခဲ့ချင်တယ် အချစ်ရယ်
ဂယက်တွေနဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုလုံးက လှိုင်းထ
ဃဂနဏ မသိနိုင်တဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်တွေက စလို့
ငါ့ စိတ်ဝိညာဉ်ဟာ နင့်ပင်လယ်နက်နက်ထဲမှာမှ
ဈာန်ရနေတဲ့ အလွမ်းတွေသာ နင့်ဆီမှာ ပျံလို့ဝဲလို့ရယ်....
ညည ရ ထားတဲ့ အိပ်မက်ဗီဇာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲ
ထိတ်လန့် စိုးရွံ့မှုတွေက ဆောက်တည်ရာမရ..
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျကို နိုင်စား မင်းမူနိုင်လွန်းခဲ့
ပြန်မရနိုင်တဲ့ အတိတ်တွေကလည်း မှုန်ဝါး
ဖမ်းစားထားတဲ့ မင်းအသံလှိုင်း အရုပ်လှိုင်းရဲ့
မျှော်လေတိုင်းမှိုင်းရီ ရာသီတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ကွယ်
ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ လေညှင်းအကစားခံ သစ်နုရွက်လေးလို ငါလှုပ်ရှား
ဝေနေအောင်သာနေတဲ့ အလွမ်းရင့်ရောင် ပန်းတွေပေါ့...
ဟေ့......အ ချစ်ေ ရ . . .
( ကဲ..အစ်မရေ..မတတ်နိုင်တော့ဘူးးးးး အဲနေရာမှာ သုံးလို့ရတာ ဠင်းတပဲရှိတယ်..။)
ချစ်သော အစ်မ ဆရာမမေငြိမ်းရဲ့ TAG ကိုဖြေထားတဲ့ ကဗျာပါ..။
အဲဒါကြောင့် အစ်မကို မူပိုင်ပေးထားပါတယ်..။
လူရွှင်တော်တွေ ပျက်လုံးထဲ ထည့်သုံးချင်ရင် အစ်မဆီမှာ ဆက်သွယ်ခွင့်တောင်းနိုင်ပါကြောင်း....;P
ဇာတ်တိုက်မနာသလို အမှားမှားအယွင်းယွင်း စကားလုံးတင်ဆက်မှုတွေ ညံ့ဖျင်းလို့
ဦးနင်းပဲ့ထောင် ပဲ့နင်းဦးထောင် မညီမညွတ် အနုပညာတွဲရေးခွဲရေးလှိုင်းဂယက်တွေကြား
အံခဲ ဇွဲသန် မှတ်ကိုက်ခြင်ကိုက် ဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ ညတွေ သိပ်များ သိပ်ကိုများ
ငါ့ခံနိုင်ရည်ကို မှတ်ကျောက်တင် ဓါးသွေးနေခဲ့ရ
လည်တံကို အဆုံးအထိ ငံ့လင့်တကြီးဆန့်တန်းလို့
ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ မညှိုးသောပန်းလို့ ထပ်မံယုံကြည်ရင်း
မင်းရဲ့ ညှို့ဓါတ်ပြည့် မှော်သားပင်လယ်ထဲ
ပိုးစိုးပက်စက်မျောပါချင်လွန်းလို့ ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ ကောင်
လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်ကိုယ်လုံး စုံးစုံးမြုပ် လက်ပမ်းကျသည်အထိ...
ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းဖို့မဟုတ်ဘူး ငါ ဒီကဇာတ်ရုံထဲ ၀င်လာတာ..
ပွဲပြီးမီးသေ..ဒီလိုလား ပွဲကလည်း မပြီး....မီးတောက်လည်း ပိုပိုကြီးလာပေါ့
ကိုယ့်ဟာကို ဘယ်လိုဆည်ရမှန်းမသိတဲ့ ရေမျောကမ်းတင်ဇာတ်ဝင်ခန်းများ
ပွဲသိမ်းကို ကြိုသိနိုင်တဲ့ ဇာတ်သွားဇာတ်လား ချုပ်ရိုးအဟောင်းများ
မရယ်လို့ ရယ်ရယ်နေရတဲ့ အပေါစားဟာသတွေ..ကာလာစုံနိုင်လွန်း
ဘယ်လောက်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အသစ်ရုပ်မထွက်နိုင်တော့ကာ.....
ငါ့ ငြီးငွေ့မှုတွေက ငါ့ သွေးပြန်ကြောထဲအထွတ်အထိပ်
ငါ့ ငိုက်မျဉ်းခြင်းတွေ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ပြိုကျမလာခင်လေးအချိန်မီ
ဟော ဒီ ကဇာတ် ရုံ ထဲက ထွက်ချလာခဲ့ပြီ ။
ဒီကဗျာအတွေးရှိနေခဲ့လို့ ဒီစာလုံးတွေ ပေါ်လာသလား ဘယ်ဟာမှ မသေချာပါဘူး..။
ချစ်သော မမ ရဲ့ TAG ကိုဖြေလိုက်တာပါ..
Advertise , Banal, Color , Disappointed , Doz, Entertainment,Fascination , Garble
Hope, In the disfigured condition , Joke, Knife , Lazy , Mosquito , Neck
Old , Pinnacle , Quench , Resistance , Seam , Tension ,Unbearable , Vein , Wave,
Xeranthemun , Yawn , Zero
ဒီ စာလုံး၂၆ လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကဗျာထဲမှာ
ရာသီဥတုက မိုးရွာပြီးစနေပူရှိန်နဲ့ နွေးမြကြည်လင်လို့
ရုံးပိတ်ရက်တို့ ထုံးစံအတိုင်း ၉နာရီကျော်တဲ့ အထိခြေကန် အိပ်နေရာမိရက လူးလဲထမိခဲ့တယ်.။.
ဒီနေ့ မြန်မာပြည်က ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ ပြပွဲကိုသွားမှာ....ပဲ.။
အနုပညာနဲ့ဆိုင်ရာ..ဘာပွဲလေးတွေပဲ ရှိရှိ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားလို့
မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာတွေ...တဲ့
ပန်းချီတွေ အနုပညာပြကွက်တွေ ရဲ့သိမ်မွေ့နူးညံ့စေတတ်တဲ့ ဖမ်းစားမှု အတိုင်း မျောလွင့်လိုက်ပါရင်း
ကဗျာရေးချင်စိတ်ဆီကို တစိမ့်စိမ့်ကူးပြောင်းသွားခြင်းစိတ်အလျင် အစီးအဆင်းက
နေရာက Dhoby Ghaut MRT ၊ Plaza Singapura ရဲ့နောက်ဘက်
11B Mt Sophia, #01-12
ဒီလှေခါးအတိုင်းတက်ရခြင်း ဆင်းရခြင်းကိုက ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သက်တောင့်သက်သာရှိလွန်း
အဆင်တသင့်နိုင်လွန်းသော ဒီနိုင်ငံ မှာ ခံစားမှုတစ်မျိုးကို ရရှိနေစေမှာ သေချာနေပါတာပေါ့..။
ဒီဝန်းကြီးထဲက အဆောက်အဦထဲမှာ...ပြပွဲက ငြိမ်သက်တိုးတိတ်စွာ ခန့်ငြားနေခဲ့တာ..။
ပြပွဲမှာ ပါဝင်ပြသကြမယ့် အနုပညာရှင်တွေ
တစ်ခန်းလုံး ကို Installation Art နဲ့ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပြီး အခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့
ဘယ်လိုမှန်းမသိတဲ့ မွန်းကြပ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ဟုန်းကနဲရသွားခဲ့ပါတယ်။
ခြင်ထောင်ချထားတဲ့ အထဲက ရှေးဟောင်းရုပ်ကြွင်းလို အရာတွေ နံရံတွေ တောက်လျှောက်မှာ
ပန်းချီဆရာရဲ့ လက်ရေးမူနဲ့ စာသား နစ်ကနဲရင်ဝကိုစိုက်ဝင်သွားခဲ့ရသည်ပေါ့..။
အိမ်မှာတော့ လက်တွေဟာ လေယက်တောင်ဖြစ်ရ
တစ်နေ့တစ်နေ့ အပူဒဏ်ကို စင်းစင်းကြီးတွေခံနေရ
နောက် The Taste Of Liquid လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Emily Phyo ရဲ့ ပြကွက်
ကွဲနေတဲ့ အိုးထဲမှာ ကိုကာကိုလာ အချိုရည်တွေ.....
From the village to city , from plain water to Coca Cola,
လို့အစချီပြီး သူ့တင်ဆက်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးထားခဲ့တာပါ..
ဆရာစိုးနိုင်နဲ့ကပ်ရက်အခန်းမှာက ဆရာမြတ်ကျော့ရဲ့ ပန်းချီကားတွေ ..
နောက် ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမ ဟောညွှန်ပြသ ခဲ့တဲ့ ဖြစ်မှုပျက်မှုတွေနဲ့ ကံကြမ္မာဇယ်တောက်ရာမှာ စင်းစင်းခံနေကြရတဲ့ ဘ၀တွေ
ဆရာMPP Yei Myintရဲ့လက်ရာတွေ..
နောက် ဆရာသည်မော်နိုင်ရဲ့ အတွေးလက်ရာ
ကျွန်မတို့ ဒီလို မဆုံးအောင် လှော်ခတ်နေခဲ့ကြရတာ...။
အဲဒီ့အခန်းလေးထဲမှာပဲဗွီဒီယို ဆလိုက်နဲ့ပြသထားတဲ့ မ၀ါနုရဲ့လက်ရာ ပြကွက်ကို
၁၉၉၇ လောက်ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ တိုက်တွေ
တောင်ဒဂုံ ၂၆ ရပ်ကွက် ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်နားမှာရှိတဲ့.....
အောင်ဇေယျတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာက အခု ဒီနေရာက ပိတ်ကားလေးထဲမှာ.......
There was no electricity regular supply , whether day or night .
When the light goes out in the darkness some chat and some move about friendless .
Others eat,work,teach and learn under the candlelight.
အဲဒီ့ကာလ..ဖယောင်းတိုင်မီးထဲမှာ ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကဗျာတွေ ဘယ်နည်းလိမ့်မလဲလေ။
ဆရာဇာမင်းထိုက်ရဲ့ ရဲရင့်ထက်မြက်သော ရေးဟန်တွေးဟန် ရေးချက် တွေးချက်တွေ
ကိုဇက်ရဲ့ ပိတ်ဖြူစတစ်စဆန့်လာခဲ့တဲ့ ခရီိး...နောက်ဓါတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယိုပြကွက်
Sinceafew year ago , I have become very interested in the movement and senses of animals
ငါးကနေ ဒိုင်နိုဆောအထိ........ ပြကွက်ရဲ့နာမည်က Room ဖြစ်ပါတယ်
သိပ်ကောင်းလွန်းတဲ့ ပြကွက်တွေထဲက ပုံထွက်ကောင်းတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံပဲ တင်ပြခွင့်ရတာ နှမျောစရာပါ...
သိပ်ထူးခြားတာကတော့ ဆရာမင်းသိမ်းဆောင်ရဲ့ REST ROOM လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ installation art ပြကွက်ပါပဲ..။
I have notice that the rest room is one place used by every one . It provideamoment of respite -even foramoment _from stress and anxiety. Rest inarest room: in an enclose space , findamoment of respite . In this room , you can forgo all inhibition.
နေရာဒေသမျိုးစုံကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဘိုထိုင်အိမ်သာ အဟောင်းတစ်လုံးနဲ
့ဆရာ့ရဲ့အာဘော်တစ်စွန်းတစ်စ ၊ သင်ဘာတွေရလိုက်မလဲ...၊ ကျွန်မရော.....
တွေးစရာတွေ သိပ်များသွားတဲ့ ပြကွက်မျိုးတွေပါပဲ..
နောက်တော့ ဆရာထွန်းဝင်းအောင်ရဲ့ရထားမှာ လိုက်ပါစီးနင်းလို့
In the train , I reconsidered the relationship between my life and myself .
နောက်ဆုံးတော့ ဒီအဆောက်အဦးကြီးရဲ့အမိုးပေါ်က လယ်ကွင်းဆီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
လယ်သမားတစ်ဦးလို ဘောင်းဘီအနားစမှာ မြေစမြေနတွေနဲ့ ရေစိုလက်စတွေနဲ့ ဦးထုတ်အဟောင်းတစ်လုံးနဲ့
ဒီကဏ္ဍကို ဖန်တီးတင်ဆက်သူ ပန်းချီဆရာပိုပို..
ကျန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ဒီပြကွက်အတွက် စမ်းသပ်မှုတွေ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြီး
အတော်လေးကို အပင်ပန်းခံပြီးမှ ပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်..။
အနုပညာသမားတိုင်း သူ့ဖန်တီးမှုတွေအတွက် ၀ါယမစိုက်ထုတ်နိုင်မှုဟာ..သိပ်ကို အံ့သြလေးစားစရာကောင်းနေမှာပါ
အခု မလေးရှားကမြေကြီးတွေ နဲ့ စင်ကာပူနေ စင်ကာပူမိုးမှာ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားတဲ့
တစ်ချို့က အပင်တောင်ဖြစ်မလာနိုင်အောင် အလှီလှီ အကျုံကျုံ..
ရာသီဥတု ကျေးငှက်တိရစ္ဆန် သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေရဲ့ဒဏ်ကို ဒီဖေါ့ဘူး၂၅၀၀ ထဲက ဘယ်နှစ်ပင် တောင့်ခံနိုင်မလဲ
ပန်းချီဆရာ ပိုပိုက ဖေါ့ဘူးအဖြူလေးတစ်လုံးကို (သစ်ရွက် ၃ ရွက် )နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။
စပါးပင်လေးတွေကို ၂၀.၅.၂၀၁၀ လောက်မှာ ပြပွဲအောက်ထပ်က stage မှာ လှေခါးထစ်စိုက်ခင်းတစ်ခု စိုက်ပျိုးပြဦးမှာပါ.
စပါးပင်လေးတွေ ကြီးထွားရင့်သန်လာခြင်း အဆင့်ဆင့်ကို ဗွီဒီယိုပရိုဂျက်တာတွေနဲ့ တင်ဆက်ပြသဦးမှာပါ...
ဆရာပိုပိုက စပါးပင်လေးတွေကိုနေ့စဉ် ပေါင်းသင်လို့
မအောင်မြင်ရှာတဲ့ စပါးပင်လေးတွေကို ကြိုးစားပမ်းစားကုသလို့
အဲဒီ့ စပါးပင်တွေကနေ သူ့အနုပညာတွေ ရင့်မှည့်လာမှာကို သူမြင်ယောင်ကြည်နူးလို့....
ပြန်လာတော့ ကြည်နူးကျေနပ်မှုတွေနဲ့ ရင်ခုန် လှုပ်ရှားလို့ရယ်
အနုပညာဆိုတာရဲ့ ကျယ်ပြောလွပ်လပ်လွန်းလှတဲ့ အာရုံခံစားမှုအသိအမြင်လမ်းစတစ်ခု
စီးထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ ရေမျောင်းတစ်ခုကို ဖေါက်ချခံလိုက်ရသလို...
နောက်အနုပညာဆိုတာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြယုဂ်တစ်ခု
တို့မြန်မာတွေ...အဲသလို နှလုံးအိမ်ကနေ သွေးကြောမတွေအထိ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်..။
ကိုယ်စိတ်ပျိုးသမျှ ကိုယ်ပြန်ရိပ်သွားဖို့ မသေချာတာသေချာနေပေမယ့်
သိချင်တဲ့ အချက်ကလေးတွေကို ပြောပြပေးတဲ့ ဆရာပိုပို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်..။
at 2:56 AM 14 comments:
နွေဦးစံပယ်တွေလည်း မလှကြတော့ဘူးပေါ့ ဖေဖေ..
ကောင်းကင်မှာ တိမ်တွေပြာနေပုံကို...က သံသယ၀င်ချင်စရာပါ
နောက်ဆုံးပေါ်ဂလိုဘယ်လ်ဖက်ရှင်နဲ့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လို့ပေါ့..ဖေဖေ..
ဖေဖေချန်ထားရစ်တဲ့ ၂၇ နှစ်မှာ
ဆူနာမီတွေ နာဂစ်တွေ ဟေတီငလျင်တွေ
ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးတွေ ဆားလ်စ်တွေ H1N1 တွေ
တာလီဗန်တွေ အသေခံဗုံးခွဲတွေ နျူကလီးယားကျိန်စာတွေ ၊
ဒုံးခွင်းဒုံးတွေ..ပုံတူမျိုးပွား သန္ဓေသားတွေ..၃ ဘက်မြင်ရုပ်လုံးကြွ မူဗွီတွေ
ဆပ်ဒန်ဟူစိန်လည်း သေဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ
ပိုလန်အစိုးရ ၉၇ ယောက်စလုံး
သူများမြေပေါ်မှာ အစိမ်းသေ သေကြေကြရတဲ့
အာဖကန်စပ် လူမည်း တစ်ယောက်က
ကြောက်စရာကောင်းအောင် မောင်းနှင်နေကြတယ် ဖေဖေရေ
စစ်ပွဲတွေရဲ့ အကြောင်းအရင်း ရလဒ်တွေကတော့
သမီးတို့ရွာလေးက ဆူးကြားက ဗူးခါးဆိုတာလို
ဟိုး....၂၇ နှစ်ကထက် သာလွန်နေခဲ့ပြီပေါ့ ဖေဖေရယ်..။
မီးတဟုန်းဟုန်း ထ တောက်ပြဦး..မှာ..
"ကိုယ်နင်းထားတဲ့ အရပ်တိုင်းက အောင်မြေ" တဲ့..
အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အမိုး အကာပါ..
သက်စောင့် ဆောင် ဓား တစ် လက် ပါ
အမိုးအကာ မဲ့ အိမ်ကြီးကနေ ထွက်လာခဲ့တဲ့..
မိုး သောက် ဖို့ ကြိုး စား နေ တုန်း ပေါ့..။ ။
(၅-၅-၂၀၁၀)တွင် ကွယ်လွန်ခြင်း၂၇ နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သော
သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးလျှင် အသက် ၇၀ ပြည့်ပြီဖြစ်သော ဖေဖေ့ ကို
( အမေများနေ့မှာ ဖေဖေ့အတွက်ရေးတဲ့ ကဗျာ အတွက် မေမေ ကျေနပ်ဂုဏ်ယူနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့)
ခံစားမိရာဆိုတဲ့ Sub Title လေးက ကဗျာတွေကိုကိုယ်ခံစားမိသလို ချရေးမယ်ဆိုပြီး
ဒါပေမယ့် ခုအချိန်အထိ ဘယ်ကဗျာတစ်ပုဒ်တစ်လေကိုမှ ခံစားမိရာဆောင်းပါး မရေးဖြစ်သေးပါဘူး။
ကဗျာတွေကို ခံစားရတာ ကဗျာရေးရတာထက်ကို နက်နည်းသိမ်မွေ့လွန်းပါတယ်..။
ကိုယ်ပြန်ချရေးလိုက်မှ ကဗျာရဲ့ အကြည်ဓါတ်လေးတွေ နောက်သွားမှာ ၊
ကဗျာဆရာပေးချင်တဲ့ ပမာဏ လျော့ကျသွားမှာ
ကဗျာခုတ်မောင်းနေရာ လမ်းကြောင်းလေး တိမ်းစောင်းသွားမှာ သိပ်စိုးရိမ်မိ လက်တွန့်နေခဲ့မိပါတယ်..။
ကဗျာတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေ စားသုံးရမယ့်အဟာရတစ်ခုလိုကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
တစ်ချို့ကဗျာတွေကတော့ ဘယ်တော့မှမရိုးအီနိုင်တဲ့ ရနံ့တစ်ခုလို ချိုမြနေတတ်ပါတယ်
တစ်ချို့ကဗျာတွေက ညခင်းဆည်းဆာမှာ တိမ်ရောင်စုံတွေ တောက်ပြနေသလိုလို
တစ်ချို့ကဗျာတွေမှာက ခွန်အားတွေ စွေးစွေးနီလို့
တစ်ချို့ကဗျာတွေကတော့ နွေးမြနေတဲ့ နံနက်နေခြည်ထဲမှာ..
အခုကျွန်မ ကဗျာခံစားမှုစာစုခေါ်မလား အက်ဆေးခေါ်မလား
ကျွန်မအတွက် ရင်ဝကိုထုတ်ချင်းခတ်ဖေါက်ဝင်သွားတဲ့ ကဗျာမျိုးလေးပါ..။
ကဗျာမှ ကဗျာ တိုတိုလေး....
ဒါဆို . . .
ငိုသံတွေ စမယ်။ ။
သူဟာ.ခုလေးတင် ညီမလေးရဲ့လက်ကို လွှတ်ချလိုက်ရသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်..
ရင်ခွင်ထဲက သားငယ်လေး လှိုင်းအရိုက်မှာ နစ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်သွားစလည်းဖြစ်နိုင်တယ်..
ရေထဲနစ်မြုတ်ရတော့မယ့် လှေငယ်ပေါ် ချစ်သူကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ
သူကိုယ်တိုင်က တစ်စုံတစ်ရာကိုဖက်တွယ်မျောပါလာရတဲ့ ကမ်းခြေမဲ့လူတစ်ယောက်လည်း
သူဟာ သည်းချေပျက်မတတ် ခြောက်ချား တုန်လှုပ်နေလိမ့်မယ်
ငြိမ်သက်စပြုလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူ.........
မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ကြောင်စီစီ ထူအန်းအန်း ငေးကြည့်နေလိမ့်မယ်..
သူ့ကိုယ်သူ သေသွားပြီးသားလား..၊ အသက်ရှိနေတုန်းလား သူ...မသေမချာကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်
တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ သူ တဖြည်းဖြည်းချင်း အသက်ပြန်ဝင်လာမယ်..
တစ်ချိန်တည်း..သူ့မိသားစုကို သူအိမ်ငယ်လေးကို ကယောင်ကတမ်းရှာဖွေနေလိမ့်မယ်...
ဘယ်လို ဘယ်လောက်အတိုင်းအဆမှန်းမသိတဲ့ အပူလုံးတစ်လုံး
သူ...သူ့မိသားစုတစ်ဦး ဒါမှမဟုတ် အားလုံးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို အတည်ပြုဖို့ ..........
သူ တစ်အောင့်လောက် သတိလစ်မူးမိုက်သွားလိမ့်မယ်..
သူ.....ငို..ရှိုက်.ပစ်..လိုက်...ဖို့ သ တိ ရ လာ..တ.ယ်....
သူသွားတာ သေချာမှ စရဲခဲ့ကြတဲ့ ငိုကြွေးသံတွေပါ.....
ဘယ်တော့မှ သွေးမတိတ်နိုင်တော့တဲ့ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ဒဏ်ရာတစ်ခုလို...
သဘာဝဘေးအန္တရယ်.၊ စစ်ဘေးအန္တရယ်များနှင့်သေကြေခဲ့ကြရသော လူသားတိုင်း
နောင်ဘ၀ဆိုတာတွေမှာ ဒီအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ.။
ကဗျာကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသော မောင်ငယ် ကဗျာဆရာ တည်ရ အား ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်